Boxwood: qarsoodi ah beerashada guuleysiga
Waxyaabaha muhiimka ah marka la beero sanduuqyada Xeebaha beeraha waa hab weyn oo lagu qurxiyo beertaada dusha iyo tirooyinka cagaaran ee kala duwan. Wixii bannaanka u janjeera waxaa fiican in la bilaabo geedka this. Boxwood (Búxus) waa warshad ka timi qoysaska Boxwood. Warshad waxaa laga helaa qaab baadiyaha ah, iyo qaabab geedo ah oo yar yar.
Sida loo koro carnation beerta
Carnation - mid ka mid ah ubaxyada ugu caansan ee beerta casriga ah. Horumarinta carnation beerta ma aha hawl adag, laakiin si loo gaaro ubax ugu quruxda badan, aqoonta qaar ayaa weli loo baahan yahay. Ma taqaanaa? Giriiggii hore, carnation waxaa loo yaqaan "ubaxa Zeus". Xaaladaha sii kordhaya ee carnation ee Carnation Garden leeyihiin caraf udgoon leh iyo noocyo kala duwan oo midab leh.
Noocyo kala duwan oo tulips, kooxo iyo fasalo ubax ah
Thanks to midabada dhalaalaya iyo kala duwan, qaababka kala duwan ee ubaxa, tulips yihiin ubaxyada ugu caansan oo ka soo colaadaha midabada guga. Caleenta caleemaha waxaa iska leh qoyska carruurta. Xitaa qarnigii XVI, lafaha ayaa la keenay Galbeedka Yurub. Dhamaan taariikhda, noocyada tulip-ka ayaa lagu sharraxay waqtiyo badan, laakiin badanaa waxaa sabab u ah isbedelka dabiiciga ah iyo isgoysyada fudud, dhirta noocyada isku midka ah ayaa lagu sharxay sida kala duwan.
Sida loo koro jihiyo beertaada
Grobia ubaxa quruxda badan oo qurxoon uma baahna beerashada iyo daryeelka adag. Sidaa darteed, bannaanka u soo jeediyaan geesinimo ah go'aan ku saabsan beerista geedka this on your site. Sidaan sidan u sameyn laheyn, waxaan kuu sharxi doonaa dheeraad ah. Lobelia: sharaxaadda warshad Lobelia waa sanadle, iyo daryeel gaar ah, geedo dilaacsan ama geedo.
Noocyo ayaa dib u soo noolaanaya: noocyo kala duwan oo dhagax dhagax ah oo loogu talagalay qurxinta xagaaga
Waxyaabaha ka yimaada molodilas - tani waa doorka ugu waxtarka badan ee aagga magaalada, oo si weyn u iftiimaya qorraxda oo aan ku faani karin ciidda bacrin ah. Nasiib wanaag, dhallinyaradu waxay leeyihiin noocyo kala duwan, tiradaas oo ka badan konton. Laakiin waxaan diiradda saareynaa sagaalka ugu caansan oo soo jiidasho leh.
Farsamaynta beerta canjeerada
Beerta Buttercup waa ubax qurux badan oo aan qabyo ahayn ee daryeelkeeda, burooyinkeeda waa mid yar oo xasuusta ah ee Rose, iyo caan ku ah, waxay xitaa xayiraan tulip ah. Wixii muddo ah, waxaa la ilaaway burcadka, ilaa ay beeraleydu bilaabeen noocyada taranta oo leh burooyinkeeda dhalaalaya ee midabada kala duwan. Korniinka oo si madax banaan kor ugu kaco koritaanka abuurka korriinka ah ee laga sameeyo abuurka abuurka ah ayaa ah mid dhib badan.
Budley: murugada oo sii kordhaya boqoradda ubaxyada ubaxyada
Budley waa wakiil ka tirsan qoyska Norwich. Deeqda duurjoogta ah, waa warshad ku taal gobollada diiran ee Koonfur Afrika, Aasiya iyo Ameerika. Beeridda waa wax aad u wayn oo naqshadeynta muuqaalkaaga ah. Markii ugu horeysay ee warshadani waxaa lagu ogaadey khabiirka Ingiriisiga ah ee Adam Baddl, kaasoo helay noocyada noocan ah dhamaadkii qarnigii 17aad wuxuuna siiyey magaca hadda loo isticmaalo.
Xulashada noocyada ugu wanaagsan dahlia sanadlaha ah, liiska ubaxa ugu caansan ee beertaada
Dahliyada sannadlaha ah waxay ku faani kartaa tiro faa'iido leh marka la barbardhigo cimilada, taasoo ka dhigaysa mid aad u jecel. Haddii aad go'aansato in ay iyaga koraan, hoos ku saabsan waxaad ka heli kartaa waxyaabaha gaarka ah ee dahlia sanadlaha ah iyo noocyada caanka ah. Dahlias sannadkii: sharaxaad Inta badan, dahlias waxaa lagu beeray dhulka muddo sanado badan, laakiin tani ma aha mid had iyo jeer wax ku ool ah, sababtoo ah dahlias sanadlaha leh dhowr faa'iidooyin: ubaxaynta noocyo of dahlias sanadlaha ah dhacdaa aad u hore, iyo waqti isku mid ah waxay si deg deg ah ugu faraxsan yihiin ubax aad u daran.
Ipomoea waa nooc ka mid ah dhirta ubax, taas oo ah wakiilka ugu weyn ee fasalka qoyska Vyunkov. Ma taqaanaa? Magaca waxaa laga helaa qalabka Giriiga - "Gorma" iyo Homios - "sida". Magaca ubaxa ayaa u muuqday sababtoo ah xaddiga aadka u xoogan, taas oo u eg sida dixiriga. Beer habboon ee ipomoea Ipomoea waxaa faafin by gooyn ama abuur.
Darajooyinka ugu sareeya ee asalka ah
Astilbe waa geedo qurxin ah oo lagu qiimeeyo waqti dheer ubax, aalado badan oo mugdi ah iyo qaababka inflorescences, si loo ilaaliyo muuqaal xiiso leh xilliga ubaxa. Astilba Arends Astilba ee noocyada this waxay ku saabsan saabsan afartan nooc oo la magacaabay ka dib breeder G. Arends, kuwaas oo u daadiyey. Kareemadani waxay u koraan mitirka dhererka, waxay leeyihiin caleemo cagaaran oo leh caleen burgundy.
Sharaxaad ka kooban noocyo iyo noocyo of spirea
Waxaa jira qiyaastii boqol nooc oo geedo xayawaan ah. Waxay ku kala duwan yihiin taajka, qaabka iyo midabka caleemaha iyo ubaxyada, laakiin dhammaantood waxay wadaagaan hal shay: muuqaal qurux badan. Wixii dhirta laga beero beertaada ama deyrta ayaa faa'iido leh inaad barato noocyada ugu waaweyn ee isgaadhsiinta. Guga-ubaxan ee isugeyn ah ee isugeyn ah Koox ka mid ah noocyada guga-ubaxa waa miro, kaas oo ubaxaya caleemaha sanadka hore ee nolosha, ubaxuna inta badan waa caddaan midabka.
Liiska noocyada ugu caansan ee dawanno
Waxaa jira caqli caan ah oo ah in geelku kor u kaco gaar ahaan beeraha iyo caleenka, laakiin maanta waxaa jira tiro badan oo beeraleyda beerta ah oo si sahlan loo kori karo boggaaga oo ay ku raaxeystaan ​​muuqaalkooda quruxda badan. Колокольчики - представители семейства Колокольчиковых (Campanulaceae).
Xeerar iyo tilmaamo dhowr ah oo loogu talagalay daryeelidda qiyaasta
Calibrachoa waa warshad xiiso leh oo dhowaan lagu soo bandhigay guryaha floristka. Wuxuu si fudud ugu wareersan yahay petunia, kaas oo muddo dheer lagu dejiyay guryo badan. Xaqiiqdii, illaa iyo 1990-kii, calarahoa waxaa loo tixgeliyey nooca petunia, laakiin markii dambe waxaa la xaqiijiyey in heerkulka hidde-geedka ay tahay geedka gebi ahaanba ka duwan.
Beerto iyo daryeel caafimaad leh
Isla markiiba, Shakespeare ayaa yiri: "Dharka midabkeedu wuxuu u taagan yahay nakeety." Waxa uu ereyadan u soo jeediyay ubax, ubax sanadlaha ah ama ubax badan. Dhirta Tani waxay ku koraa qaab duurka dufan leh leh inflorescences kuwaas oo casaan, caddaan iyo casaan. Diesies waa mid ka mid ah ubaxyada koowaad ee qorraxxirta, sidaas daraadeed meelaha qaarkood waxaa loo yaqaan "indhaha maalinta."
Phlox: qarsoon ee beerashada guul leh beerta
Phlox waa warshad cagaaran, wakiil ka tirsan qoyska Sinuhovye (Polemoniaceae). Marka loo eego xaaladaha dabiiciga ah, waxaa jira qiyaastii 85 nooc, iyo qiyaastii 40 ayaa loo isticmaalaa beerta. Dhirta dhirta waxay noqon kartaa mid toos ah, kor u kacday, ama duug ah. Heerka phlox wuxuu noqon karaa mid aad u yar (10-20 cm) ama weyn (120-150 cm).
Talooyin dhowr ah oo ku saabsan koritaanka escholcias
Escholsiya oo loo yaqaan 'California Poppy'. Geedka waxaa lagu qaddariyaa beeraleyda iyo ubax beeraha for unpretentiousness, kala duwan oo midab iyo ubax dheer ubax. Intaa waxaa dheer in ay qurxinta, sifooyinka bogsiinta ee esholtia ma shaki, ee daawada dhaqameedka Californian poppy caawiyo dadka waaweyn iyo carruurta.
Qarsoonaanta koritaanka koritaanka beerta
Monarda waa ubax iyo qalab caafimaad leh. Tani waa dhirta ornamental ubax leh ubaxyo laba dabacsan. Monarda waxay leedahay dhadhan liin. Warshad Tani waxay leedahay Magacyo badan: Bergamot duurjoogta ah, miro galloon dahab ah, Hindiya. Ma taqaanaa? Saliidda muhiimka ah ee Monarda waxay leedahay bactericidal guryaha iyo dhaqdhaqaaqa anthelmintic.
Xulasho ah oo ah nooca beeraha ugu caansan iyo hoose ee castan
Kaloorida waa dhir beerka ah, laakiin inta badan waxaa lagu beeray sidii geedo ama geedo sanadle ah. Daqsiyadu waa kuwo ballaaran oo faafaya, kaliyahna wuxuu gaaraa laba mitir oo dherer ah. Ubaxa dhirta dhirta iyo qiimaha madaxtooyada ma laha. Warshadu waxay soo saartaa miraha sanduuq alval-spherical, kaas oo lagu daboolay weelasha.
Phlox: liiska noocyada ugu fiican
Phlox - koox ballaaran oo kala duwan oo ah ubaxyada beerta, kuwaas oo ay ku jiraan geedaha dheeraadka ah iyo dhirta hooseeysa koraya, oo ku dhow daaqaya dhulka. Laakiin ku dhowaad dhammaan phlox - ubaxyo dilka ah. Bannaanka u soo jiidata ubaxyada quruxda badan ee muuqaalada iyo midabada kala duwan. Qaadista noocyo dhawr ah oo dhir ah, waxaad ku sugnaan kartaa beerta ubaxsan ee guga ilaa xilliga dayrta.
Verbena ee beerta - isku dheelitir buuxda naqshad muuqaal kasta. Ubaxyo dhalaalaya, caleemo qani ah oo hodan ah - dhammaan fiilooyinkan. Warshadu waxay ka timaaddaa gobollada kuleylka ah ee Maraykanka, oo ah wakiil qoyska Verben ah, oo leh in ka badan 200 nooc oo ubaxyo kala duwan ah. Dad kala duwan ayaa ugu yeeray Verbena si kala duwan: "Cawska Hercules", "Venus xidido" ama "Mercury's blood".